मेरा नातिहरुले मेरो नाम लिएर गर्व गरुन : ओम मगर — Motivate News
Posted on November 18, 2016 by motivate news
काठमाडौँ – हरेक दिन पशुपतिमा धेरैका लासहरु जलिरहेका छन् । कोही उमेर पुगेर भगवानको शरणमा गएका छन् भने कोहीले अकालमै आफ्नो ज्यान भगवानलाई सुम्पिरहेका छन् । तिनीहरुमा कतिका मलामी राम्रै हुन्छन् भने कोही मलामीविनै स्वर्ग पुग्छन् ।
त्यही पशुपति हो जहाँ नेता तथा कलाकारको मृत्यु हुँदा हजारौँको भिड हुन्छ, प्रहरीले लठ्ठी चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ तर त्यही पशुपतिमा कोहीले दुइचार जना मलामी पनि पाउँदैनन् । घरका दुईचार दाजुभाइबाहेक अरु हुदैनन् प्राय । मानिस भएर जम्मिएपछि धेरै ठुलो काम केही नगरेपनि दुईचार हजार मलामी कमाएर जानु पर्छ ।
अहिले अथवा एकाइसांै सताबदीमा कैयौ मानीसहरुले पैसाबाहेक अरु केही सोचिरहेका छैनन् । कसरी मानिस ठगेर धेरै पैसा कमाउने, कसरी अर्काको भन्दा ठुलो घर बनाउने, छोरा छोरीलाई राम्रो स्कुलमा कसरी भर्ना गर्ने यि र यस्तै कुरा बाहेक अरु सोच्न फुसदै छैन धेरैलाई । पैसा भयो भने सबथोक किन्न सकिन्छ भन्ने अहम् भावनाले गर्दा उनीहरुले मलामी गुमाइरहेका छन् । र गुमाई रहेका छन् जुगैजुग बाँच्ने सम्भावना पनि ।
तपाइ कति जनालाई बुवाको हजुर बुवाको नाम थाहा छ ? यो अलि टाढै भयो कि क्या हो । तपाईलाई तपाईको हजुर बुवाको नाम के हो; थाहा छ ? कति जनाले आवश्यक ठाँउँमा आफ्नो हजुर बुवाको नाम थाहा नभएर गलत पेश गर्नुभएको छ ? यि प्रश्न हेर्दा सामान्य लाग्छन् तर यसको भित्री कुरो गम्भिर छ । यी प्रश्न त्यत्तिकै जन्मेका हैनन् । नेपाली समाज भर्खर मात्र विकासको चरणमा प्रबेश गरेको छ । देशको विकास गर्नका लागि टेक्नोलोजीको विकास आवश्यक छ र हुनुपर्छ शिक्षाको विकास पनि ।
हाम्रो पालामा हामी विश्वभरको समाचार एक सेकेण्डमा थाहा पाउँछौँ तर हाम्रा हजुरवाले एउटा सामान्य खबर पाउन पनि महिनांै कुर्नु पथ्र्यो यो वास्तविक यथार्थता हो । कैंयौँले यसैगरी महिनांैसम्म पनि आफ्नाको खबर पाँउदैनन थिए । माथिका प्रश्नले मलाई पनि झस्क्याएको छ । मैले हजुर बुवाको नाम आवश्यक पर्ने ठाँउमा फरक फरक पेस गरेको छु । मनमा जे आयो त्यही नाम लेख्ने गर्दछु, तिन पुस्ते राख्ने ठाँउमा । सायद तपाईंलाई पनि यस्तै भएको होला । मानिस भएर जन्मेपछि धेरै टाढा त नजाँउ आफ्ना नातिले मेरो नामको बारेमा यता उता भांैतारिन नपरोस् ।
हाम्रा पुर्खाले केही सृजनात्मक काम गरेनन र आज हामीलाई उनीहरुको नाम थाहा पाउन बुवालाई सोध्नुपर्छ तर हाम्रो बारेमा जानकारी लिन हाम्रा नातिले यसरी सोध्नु नपरोस् । नाम खोजेर भांैतारिनु नपरोस् । यस्तो काम गरेर देखाउँ जुन कामले गर्दा मेरा नातिले हजुरबुवाको नाम लिएर गर्व गरुन् । मेरो गाँउका लागि मैले केही गर्न पाउँ । मेरो गाँउमा जताततै मेरो नाम चलोस् । यि माथिका आंशिक हरफहरु हुन शिक्षा सेवी ओम मगरका ।
काठमाडौँको जोरपाटीमा रहेको भेनस पव्लिक स्कुलका प्रिन्सिपल हुन ओम मगर । उनी चितामा जल्लनका लागि मात्र जन्मेका होइनन् । समाजका लागि सृजनात्मक काम गरेर जुनीजुनी बाँच्न चाहान्छन् । समाजको रुपान्तरण गर्न चाहान्छन् । आफ्नो सृजना मार्फत समाजको रुपान्तरण गरी अमरत्व कमाउन चाहान्छन् उनी ।
सानो उमेरमा उनको यो सफलता लोभलाग्दो छ । उनी उमेरले ३० बर्ष पुग्नै लागे तर उनको उमेरका हजारांै युवाहरु जागिर चाहियो भनेर कोही आमरण अनसनमा छन् भने कोही विदेशमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् । उनकै उमेरका कोही गुण्डा गर्दीमा संलन्न छन् भने कोहीले गाँउमा आफ्नो खुवीलाई नचिनेर बरालिरहेका छन् । तर उनी भविष्यका कर्णधारलाई शिक्षाको ज्योतिबालि भविष्यको बाटो देखाइ रहेका छन् । धेरैलाई बिहानीको मिर्मिरे देखाइ रहेका छन् र बनाएका छन् हजारांैलाई शिक्षित पनि ।
उनको यो सफलतामा सपानाको ठुलो हात छ र मिहिनेत पनि कम्ति छैन । उनले सानो उमेरदेखि नै सपना देखे अनी सपनालाई शिरोधार्य गर्दै आफ्नो काममा दिन रात अहोरात्र खटिरहे । धेरै समय खट्न सक्नु उनको विशेषता हो । संखुवासभाको खाँदबारीमा हो उनको जन्म घर । उकाली ओराली गर्दै बितेको थियो उनको बाल्यकाल । आफुले चाहेको र सोचको कुरा हुनैपर्ने, गर्नै पर्ने जिद्धी स्वभावका उनी हरेक काम आफ्नो पक्षमा पारेरै छाड्थे । संधैं जित्नुपर्ने उनलाई आफुले चाहेको काम जसरी पनि सफल पारेरै छाड्छन् ।
कहिले कांही शिक्षकले झपारेको बेला होस् या परिक्षामा अर्काको नाम पनि जस्ताको तस्तै सारेर बुझाउँदाको घटनाले किन नहोस् उनलाई जिन्दगीमा अगाडि बढ्न धेरै ठुलो प्रेरणा मिलेको छ । त्यस्ता खालको घटनाले उनको जीवन सफल हुनुमा महत्वपुर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
कक्षा १ को कुरो हो, उनलाई एविसिडि भन्न आउँदैन थियो । कक्षामा शिक्षकले उनलाई एविसिडि भन्न भनेर उठाए । उनले आँउँदैन भनेर टार्न खोजे तर ति शिक्षकले मानेनन् । जति सकिन्छ त्यति भन्ने दवाब दिए, त्यसपछि उनले नहेरी ए देखि जेट सम्म नरोकिएर पढेर सुनाइदिए । त्यो घटनाले उनको जिन्दगीमा ठुलो शिक्षा दियो । आँटेपछि प्राय कामहरु सम्भव हुँदारहेछन् भनेर उनी उत्साहित भए र जिन्दगीमा आइपर्ने हरेक समस्या पर्दा त्यही घटनालाई सम्झिन्छन् र काम गर्न आँट गरिहाल्छन् उनी ।
त्यस्तै अर्को घटना पनि छ, बार्षिक परिक्षा थियो । आफुले जानेकै भएपनि चोर्न पाइन्छ भन्दा परिक्षामा कलम चल्दैन । उनलाई पनि त्यस्तै भयो । साथीले लेखेको चोर्दा खेरी उसको नाम पनि जस्ताको तस्तै लेखेर बुझाएका रहेछन् । पछि उनले त्यो कुरा थाहा पाए, उनलाई लज्जा बोध भयो । त्यो दिनदेखि उनले कहिलै चिट चोरेनन् ।
गरिब परिवारमा जन्मेर हुर्केका मगरले कक्षा १ मा राम्रोसँग अध्ययन गर्ने अवसर पाए । उनको परिवारमा ठुलो दाइ र दिदी घरबारे भैसकेका थिए भने घरमा माइला दाइ, बुवाआमा र उनी थिए । बुवा र दाइको सहयोगले कक्षा १ कोे रिजल्ट राम्रो आएको थियो । कक्षा २ मा पनि बुवाले दुःख गरे रै भएपनि अध्ययनको लागि राम्रो व्यवस्था गर्नु भएको थियो । उनी सानै थिए, राम्रो नराम्रो खासै थाहा हँुदैन्थ्यो छ सात बर्षको उमेरमा । उनको बुवा गाई गोरुका लागि घाँस लिन जङगल गएको बेलामा रुखमा घाँस काट्दै गर्दा त्यही रुखबाट लडेर बुवाको मुटुमा ठुलो चोट लाग्यो ।
अहिलेपनि मुटुमा केही समस्या देखा पर्यो भने उपचार गर्न समस्या छ, पहिलाको कुरै छोडौँ, त्यो पनि संखुवासभा जस्तो ठाँउमा उपचार सम्भव थिएन । त्यही समस्याले गर्दा उनको बुवाको निधन भयो । अकालमै धर्तीबाट सदाका लागि बिदा हुनुभयो । ओम मगर टुहुरा भए । उनी अहिले पनि बाटोमा हिंड्दा सुकेको रुख देखेपछि बुवालाई सम्झिन्छन् । मन खिन्न पार्दै आफ्नो बाटो लाग्छन् ।
जब उनका बुवाको निधन भयो तब उनका दुखका दिन सुरु भए । घरमा अब उनी र आमा मात्र रहे । उनका दाइ प्राय घरमा बस्दैनथे । जेनतेन उनकी आमाले नजिकैको स्कुलमा कक्षा पाँचसम्म अध्ययन गराइन् । उनी पढाइमा पनि तेज थिए र अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि उनको सहभागिता राम्रो रहन्थ्यो । कक्षा पाँच पास गरिसके पनि उनलाई अध्ययनको लागी करिब दुई घण्टाको पैदल यात्र गरेर जानुपर्ने भयो । बास्तविक संघर्ष उनले माध्यामिक तहको अध्ययन गर्दा गर्नु पर्यो । बिहान सात बजे खाना खाएर दुई घण्टाको पैदल यात्र गरी स्कुल जानु पथ्र्यो ।
उनलाई स्कुल जान र आउन बिहान बेलुकाको समय ठिक्क हुन्थ्यो । यति सम्मकि उनी नुहाउन र कपडा धुने समय निकाल्न पनि शनिबार बाहेक धौधौ हुन्थ्यो । कपडा मैलो भएको खण्डमा उनी बाटोमा नै सर्ट धोएर काँधमा राखेर स्कुल जान्थे । स्कुल पुग्दासम्म उनको सर्ट सुकि सक्थ्यो । सुरुका दिनहरुमा उनले यसै गरी आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिए । तर पछि अलिक बुझ्ने भैसकेपछि उनले स्कुल गएर आउने समय घरमै अध्ययनमा बिताउन थाले । शिक्षकले स्कुलमा पढाएको कुरा सुनेर जति दिमागमा राखिन्छ त्यो भन्दा धेरै घरमा बसेर अध्ययन गर्दा दिमागमा राख्न सकिन्छ भनेर उनले घरमै अध्ययन गर्न थाले ।
हप्तामा दुइदिन स्कुल जान्थे उनी । आफंै पढ्थे उनी आफुले नबुझेको कुरा सोध्नका लागि मात्र स्कुल जान्थे । उनका साथीहरु पनि छक्क पर्थे उनकोे रिजल्ट देखेर । सेल्फ स्टडी उनका लागि रहर हैन बाध्यता बन्दै गयो । स्कुल जाने समय मात्र हैन घरमा आउने अन्य पाहुनाहरुलाई खुवाउनेदेखि सबै काम उनले नै गर्नु पथ्र्याे । आमा र उनी मात्र बस्थे घरमा । बिहान सात बजे खाना बनाएर, खाएर स्कुलका लागि तयारी हुन्थे उनी । उनी बाटोमा पढ्दै पढदै स्कुल सम्म पुग्थे । उनले अध्ययन गर्ने समय भनेकै बाटोमा हिंड्दा खेरीको हो । अरु समय घरको काममा खटिन्थे उनी भने बिहान बेलुका स्कुल जान र आउन ठिक्क हुन्थ्यो, त्यसैले अंग्रेजीका मिनिङ् र विज्ञानका सिद्धान्त बाटोमै कण्ठ पार्थे । यति गर्दा पनि उनको कक्षामा राम्रो स्थान आउँथ्यो ।
एक्लै दुई घण्टाको बाटो हिंडेर उनले एसएलसी सम्मको अध्ययन सके । गाँउँमा दुःख गरेर एसएलसी पास गरेको देखेर उनको डाहा गर्नेहरु जुर्मुराउन थाले । मगरको छोरा एसएसलसी पास गर्यो भन्दा उनको सान झन बढेको थियो गाँउमा । उनको गाँउमा एसएलसी पास गर्ने उनी नै पहिलो हुन, त्यसैले अघिल्लो दिन मगर भनेर हेला गर्नेहरु भोलिपल्टबाट त आफ्ना हुनथाले । गाँउकाले मगरको छोरो अब ठुलो मान्छे भयो भनेर फुक्र्याउन थाली सकेका थिए । गाँउको स्कुलमा पढाउने कामको अफर पनि नआएको हैन उनलाई । तर उनले त्यो जागिर खान मानेनन् ।
उनले काठमाडौँ आएर थप अध्ययन गर्ने सोच बनाए । घरमा आमासँग सल्लाह गरे । आमाले पनि, ‘भैगो अब धेरै किन पढ्नु पर्यो र यतिकैमा जागिर खाएर बस्दा हुन्छ’ भन्नुभएको थियो तर उनले मानेनन् । जसरी पनि थप अध्ययन गरेरै छाड्ने अठोट लिएका उनले आमालाई फकाएरै भएपनि काठमाडौँ आउने निधो गरे । उनका एक जना दाइ काठमाडौँमै थिए । उनले दाईलाई खबरै नगरी घरमा भएको एकहजार रुपंैया बोकेर काठमाडौँ आए । उनले दाइलाई खबर नगर्नुको कारण दाइले काम गर्ने ठाँउमा तलब कम थियो । भाइलाई पढाउन सकिन्नकी भनेर नबोलाउन सक्ने खतरा उनले देखेर खबरै नगरी काठमाडौँ आए ।
यदि उनले दाइलाई भनेर आउन खोजेका भए उनको सपना सपनामै सिमित हुनसक्थ्यो । बुद्धिमानी अपनाएर उनी काठमाडौँ आए । दाइको कमाइभन्दा आफँै कमाएर अध्ययन गर्ने अठोटका साथ उनी काठमाडौं प्रबेश गरेका थिए । उनको उद्धेश्य अध्ययन गर्ने थियो । अध्ययन गर्न पैसा चाहिन्छ नै, आफुलाई पढ्ने पैसा गाँँउमा पनि उनी आपैmंले कमाउथे । गाँउमा विभिन्न ठाँउको बाटो बनाउनेदेखि स्कुल, खानेपानी लगायत धेरै ठाँउमा उनले काम गरेर आफ्नो पढाइ खर्च निकालेका थिए भने काठमाडौँ आएपछि पनि उनले त्यस्तै खालको कामलाई निरन्तरता दिए ।
जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाए भनेजस्तै, ओम मगरले आफु कलेज भर्ना हुने पैसा आफैले कमाएका थिए । उनी काठमाडौँ आए लगत्तै उनका चिनजानको दाईले एउटा ठेकेदार कहाँ काम लगाई दिएका थिए । उनले काठमाडौँ आएपछि पहिलो पटक सुकेधाराको बाल्मिकी स्कुल (वाग्मती कलेज) को पर्खाल बनाउन सुरु गरेर कामको सुरुवात गरेका थिए ।
बिहान उनीे कलेजमा अध्ययन गर्न जान्थे र दिउँसो काम खट्थे । त्यहाँ काम गरेको केही पैसाले उनी पशुपति क्याम्पसमा भर्ना भए ।
कलेजमा भर्ना त भए तर उनलाई उत्साह दिने हैन, झन निरुत्साहित पार्न थालियो । उनी काठमाडौँ अग्रेजी शिक्षक हुन भनेर आएका थिए, तर जता ततै बाट उनलाई निरुत्साहित पार्ने काम गरियो । कक्षा पढाउने शिक्षकले मैले पनि केही समय अंग्रेजी पढेको हो, त्यति सजिलो छैन । भनेर सम्झाउँथे, कलेजको पढाइ पनि त्यस्तै थियो । उनी एकदमै मिहिनेती स्वभावका युवा फेरि आफुले चोहेको कुरा पुरा गरेरै छोड्ने भएकाले कसैका खोक्रा भाषण तिर लागेनन् ।
कलेज सुरु गरिसकेपछि उनी बिहान कलेज जान्थे र दिउँसो लेवरी काम गर्न जान्थे । उनको दैनिकी एकदमै कस्टपुर्ण रुपमा बितेको थियो । बिहान पाँचबजे आँखा नखुलेकै बेला उठेर कलेज जान्थे । उनको बसाई सुकेधारामा थियो । त्यहाँबाट उनी बिहान पाँचबजे कलेजका लागि हिंडि सक्थे । गाडीको उज्यालोको साहेताले उनले बाटोमा मिनिङहरु पढ्दै कलेज सम्म पुग्थे । उनको पढाइ प्राय बाटोमा नै हुन्थ्यो । त्यसपछि कलेजको पढाइ सकेर उनी सिधैँ काम गर्न हिडिहाल्थे । कलेजसम्म अध्ययन गर्दा उनले जुत्ता कहिलै देखेनन् । देखेनन हैन लगाउन पाएन भन्दा अझ उत्तम होला ।
उनका समकालिन साथीले जुता लगाएको देखेर उनलाई पनि जुता लगाउन रहर लाग्थ्यो तर उनको कमार्इंले जुता किन्न पुग्दैन थियो । कलेजबाट त्यही चप्पल पट्काउदै, बिस्कुट खाँदै काम गर्ने ठाँउमा पुग्थे, अनि काममा खटिहाल्थे । कति दिन त उनी भोकै काममा खटेका छन्, त्यसको हिसाब किताब उनीसँग छैन । पढाइमा यति मिहिनेती थिए कि घौँटी खन्दा खन्दै धेरै ओटा मिनिङ् कण्ठ पारी सक्थे । उनलाई इन्टर पास गर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा भयो । कसैले अंग्रेजी जस्तो विषय पास गर्न गाह«ो हुन्छ भनेर डर देखाउँथे भने कसैले ट्युसन पढाइदिन्छु भनेर ठगी गरेर भागेका थिए ।
उनले अध्ययनका लागि कलेज पनि छुटाएनन् र ट्युसन पनि पढे । ट्युसन पढ्दा पनि उनी धेरै ठाँउमा ठगिएका छन् । चाबहिलमा पढाउने शिक्षकले मोटिभेट हैन डिमोटिभेट गरेर पढाउँने हुँदा उनले त्यहाँको पढाई छोडेर ट्युसनको लागि लगनखेल गए । त्यहाँ पनि त्यति राम्रो लागेन, त्यहाँबाट पनि ठगिए उनी । धेरै ठाँउबाट निरुत्साहित भए । यतिसम्म निरुत्साहित भए कि काठमाडौं आएकोमा नै पछुतो मान्न थाले । पछुत्तो मात्र हैन् काठमाडौँमा बसेर धेरै जनाको मुर्गा हुनुभन्दा गाँउमै फर्किनुपर्छ कि भन्ने सोच पनि बनाए उनले । तर उनलाई गाँउ जान त्यति सजिलो थिएन । गाँउमा पढ्न भनेर काठमाडौँ गएको मगरको छोरो पढ्न नसकेर आयो भनेर कुरा काट्छन् कि भन्ने डरले उनले बरु काठमाडौँमा नै संघर्ष गर्ने निधो गरे ।
उनले सोचे ‘जसरी पनि पढेरै जानुपर्छ, म पढ्न आएको हुँ । सबैलाई देखाउनु पर्छ’ भनेर रात दिन किताबमा बाहेक अन्यत्र ध्यान दिएनन् । लगनखेलबाट ठगिएपछि उनलाई फेरि धेरैले निरुत्साहित पारे । मेरो भाग्य नै यस्तै हो कि ? किन मलाई नै, दुखै दुख पर्छ भनेर एक चोटी रत्नपार्कको ज्यतिष कहाँ हात हेराउन गए । त्यो ज्योतिषले पनि, “तेरो पढाई एसएलसी भन्दा माथि छैन” भनेर भनि दियो । त्यसपछि उनी झन निरास भए । त्यो ज्योतिषले आर्मीमा भर्ति हुन सल्लाह पनि दिएको थियो ।
त्यसपछि झन मिहिनेत गर्ने सोच आयो उनमा । कसरी हुँदो रहेछ, मिहिनेत गर्यो भने कसरी पास नहुँला र भनेर पहिलाको भन्दा धेरै समय पढाइमा दिन थाले । पढ्न पनि किताब हँुदैन थियो । साथीसँग किताब मागेर फोटोकपि गर्दै पढ्थे । एक दिनको कुरा एउटा साथीसँग उनले फोटोकपी गर्नको लागि भनेर किताब मागे, ति साथीले बचन लगाए । तँ किन्न सक्दैनस रु कितब दिन्न’ भनेर उनलाई किताब दिएनन् । ‘म गरिब भएर होला सबैले हेपेको सोचेर नजिकै रहेको पुस्तक पसलमा गए । त्यो पसलमा उनले किताब दिन आग्रह गरे । उनले पनि किताब दिन मानेनन ।
उनले खासमा फोटोकपि गर्न किताब मागेका थिए तर साहुले दिएनन । उनीसँग गोजीमा पचास रुपैंया रहेछ, त्यो पैसा र उनीसँगको विद्यार्थी परिचय पत्र धरौटी राखेर पुस्तक पसलबाट किताब लिएर गए । उनी त्यो घटनालाई जिन्दगीको सबैभन्दा अविष्मरणीय क्षण भनेर सम्झन्छन् । उनको जिवनमा त्यस्तै अर्को घटना पनि घटेको छ । उनी लेवरी काम गर्दथे । कामको सिलसिलामा उनी कहिले कता पुग्थे त कहिले कता । एकदिन उनले पानीको पाइँप विछ्याउनका लागि घैँटीले खनिरहेका थिए । खन्दा खन्दै कलेजको साथीको घरमा पुगेछन् । त्यो साथीले देखिहाल्यो पाइप बिछ्याउन खन्दै गरेको ।
त्यही साथीले अघिल्लो दिन उनको हातमा उठेका ठेलाको बारेमा सोधेको थिए । उनले आफु ब्रिटिस आर्मीमा भर्ति हुनको लागि तालिम गरिरहेको र पुसअप हान्दा ठेलाभएको जानकारी गराएका थिए । भोलिपल्ट त्यसरी बाटो खनेको देख्दा उनी आफंैलाई लज्जा बोध भयो । त्यसपछि उनले आफ्नो कामको प्रकृति परिवर्तन गरे । करिब एक बर्षसम्म उनले लेवरी काम गरे । त्यो बिचमा उनले धेरै दुःख संघर्ष गर्नु पर्यो । केही समय खाली बसेका उनले ठमेलको एक रेस्टुरेन्टमा राती भाँडा माज्ने काम पाए । त्यतिबेलासम्म उनले साइकल किनिसकेका थिए ।
उनी राति १२ बजेसम्म रेस्टुरेन्टमा भाँडा माज्थे । त्यसपछि साइकलमा राती कोठा फर्किन्थे । त्यसै गरी उनले त्यहाँ केही समय बिताए । त्यतिकैमा कलेजको पहिलो बर्षको रिजल्ट पनि आयो । करिब ३ सय जना विद्यार्थीले परिक्षा दिएका थिए । तिन सय जनामा मात्र १५ जना पास भएका थिए । त्यही १५ जना भित्र परेका थिए ओम मगर पनि । त्यसपछि उनलाई लाग्यो मिहिनेत गर्यो भने असफल भन्ने हुँदो रहेनछ । भाग्य हातमा लेखेको हुँदो रहेनछ, हात नहुनेको पनि भाग्य हुन्छ भन्ने सोच उनको मनमा पलायो ।
उनलाई ति निरुत्साहित पार्ने शिक्षक अनि रत्नपार्कमा बसेर पैसा थुत्ने ज्योतिष सबै वाहियात लाग्नथाल्यो । उनी जोबाट ठगिए, काठमाडौँमा ठगेर पैसा कमाउनेहरुको जमात जस्तो लाग्यो । उनले पहिला पनि कर्ममा विश्वास गरेका थिए । पछि झन मिहिनेत गर्न थाले । यसैगरि उनले इन्टर पास गरे । त्यसपछि उनले कोर्सका साथै अन्य किताबहरु प्नि पढ्न थाले । उनलाई ‘यू क्यान विन’ भन्ने किताबले पछिल्लो पटक धेरे सफलता दियो ।
उनले त्यो किताबबाट सफलता के हो ? कसरी सफल हुन सकिन्छ ? असफलतालाई कसरी बुझ्ने सबै कुरा उनले त्यही किताबबाट पाए । त्यसपछि डा. योगी विकासानन्दका किताबले पनि उनलाई उत्प्रेणा दियो । उनी काम र पढाइमा उत्तिकै विश्वास गर्नथाले । उनले होटलमा गरेको राम्रो काम देखेर पद उन्नति पनि भयो । पदउन्नति भएको केही समयमा नै उनले होटलको जागिर छोडे । त्यसपछि एउटा संस्थामा उनले काम गर्ने अवसर पाए तर त्यो नेटवर्किङ जस्तो भएकाले होला त्यो भागेर गयो ।
त्यसपछि उनमा दाँया वाँया गर्न भन्दा पढाउनु पर्छ भन्ने सोच पलायो र एउटा स्कुलमा पढाउन गए । त्यति बेलासम्म उनी कलेजमा व्याचलरमा भर्ना भैसकेका थिए । उता घरमा आमा यक्लै हुनुहुन्छ । कहिले काँही फोनमा कुरा मात्र हुन्थ्यो । पैसा पनि पठाइ दिन्थे उनले आमालाई । घर गएर आउन उनलाई करिब २ महिनाको तलब चाहिन्थ्यो । त्यही भएर उनी गाँउ गएनन् बरु आमालाई यतैबाट सक्दो सहयोग गरे ।
स्कुलमा पढाउँदा उनले जानेको सबै विषय पढाउँथे । त्यो स्कुलमा उनले एक बर्ष काम गरे । त्यसपछि उनलाई अर्काे स्कुलबाट राम्रो अफर आयो । पहिला गरी आएको भन्दा दोब्बर तलब दिने प्रस्ताव आयो । उनले हुन्छ भन्दै पहिलाको स्कुल छोडेर नयाँ स्कुलमा काम सुरु गरे । त्यपछि उनका सुखका दिन सुरुभए । फेरि एक बर्ष पछि अर्को स्कुलले पनि उनलाई दोब्वर तलबको अफर गर्यो, त्यो स्कुल छोडर फेरि अर्को स्कुलमा उनले काम सुरु गरे । त्यस्तै गर्दागर्दै उनले धेरै स्कुलमा काम गर्ने अवसर पाए । उनी स्कुलको जागिर छोड्न भन्दा पहिला एक जनालाई आफ्नो ठाँउमा राखेर मात्र छोड्थे, यो उनको विशेषता हो । कसैलाई पनि आफ्नो स्वार्थ पुर्तिका लागि धोका दिनु हुन्न भन्ने मान्यताका उनी यसैले गर्दा सबैसंगको सम्बन्ध बचाई राखेका थिए ।
यसैबिचमा उनले शिक्षकहरुको एउटा नेटवर्क पनि बनाए । नेपाल शिक्षक संगठन भन्ने संस्था खोले र त्यसको नेतृत्व मगर आफैंले गरे । त्यही संस्थाले कुनैबेला शिक्षक आन्दोलन पनि मच्चाएको थियो । त्यो आन्दोलनको नेतृत्व पनि उनैले गरेका थिए । स्कुलमा प्रिन्सिपलले गर्ने व्यवहारले दिक्क उनी त्यही व्याहारका कारण पनि शिक्षक युनियन गठन भएको हो ।
यसरी उनले एकपछि अर्को सफलता हात पार्दै गए । त्यही सफलताले गर्दा केहि बर्ष अघिदेखि उनले एउटा स्कुल सम्हालेर बसेका छन् । करिब सात सय विद्यार्थीको उज्यालो भविष्य कोर्दैछन् उनी । जोरपाटीमा रहेको भेनस पब्लिक स्कुलमा प्रिन्सिपलको कुर्सिमा विराजमान छन् उनी अहिले । त्यो उनको सफलता हो । काठमाडौँ आएपछिको करिब पाँच बर्षपछि उनी संखुवासभा फर्किएको थिए ।
पाँचवर्षसम्म उनलाई नत दसैं आयो नत तिहार सबै साथीहरु दसंैतिहार भन्दै रमाइलो गर्दथे तर उनी पढाइमा ध्यान दिन्थे । त्यही त्यागले गर्दा उनले पाँच बर्षमा व्याचलर सकेर आफ्नो जन्मघर फर्किए । गाँउमा पाँच बर्षसम्म धेरै परिवर्तन आइ सकेको थियो । उनलाई पहिला हेर्ने नजरहरु परिवर्तन भैसकेका थिए भने उनको परिवारलाई हेर्ने नजर पनि फरक थियो । उनकी आमा पनि उनको सफलता देखेर खुसी थिइन भने गाँउलेहरु पनि सहयोग गर्ने खालको व्यावहार गर्दथे । केही समय गाँउको बसाइपछि फेरि काठमाडौँ आए उनी ।
पछि मास्टर्समा पनि ज्वाइन भए र पासपनि गरिसकेका छन् । उनी चितामा मर्न चाहाँदैनन । जुनिजुनीका लागि बाँच्न चाहान्छन् । अहिले उनी एउटा शैक्षिक डकुमेन्ट्री बनाएर जताततैबाट वावाई पार्इंरहेका छन् । योे डकुमेण्ट्री पछि उनले मोटिभेस्नल किताब पनि लेख्दैछन् । अबको केही समयमा नै हामी ओम मगरको मोटिभेस्नल किताब पनि पढ्न पाउँने छौँ । उनको यो सफलतामा उनकी आमा पनि मख्ख छिन् तर उनलाई एउटै कुराले अधुरो अपुरो जस्तो बनाएको । उनकी आमाको एउटै प्रश्न छ, छोरा बुहारी कहिले ? जूनकिरी पुस्तकबाट
Posted in मुख्य समाचार, युवा उद्दमी | Tagged academy off commerce, OM Magar, ओम मगर | Leaveareply